ထမင်းကျန်များကို နွှေးစားပါက အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်!! by popolay.com
ထမင်းကျန်များကို နွှေးစားပါက အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်!!
23 Dec 2019 913 Views
မြန်မာလူမျိုးတို့ဟာ ဆန်(ထမင်း)ကို အားပြုစားကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းစား အစာအစာတွေ ဘယ်လောက်စားစား ထမင်းစားလိုက်ရမှ တင်းတိမ်တတ်ကြပါတယ်။ အခုလို ထမင်းကို တန်ဖိုးထားပြီး စားတတ်ကြသူတွေမှာ ကျန်းမာရေးအရ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ထမင်းကို မနက်ညစာ တစ်ခါထဲချက်ထားပြီး ထမင်းကျန်တွေကို ညနေကျမှ ပြန်နွှေးစားတာ၊ ညဘက်ကျန်တဲ့ ထမင်းကြမ်းတွေကို စနစ်တကျမသိမ်းပဲ နောက်တစ်နေ့နံနက်မှာ ပြန်နွှေးစားတာတွေက အစာအဆိပ်သင့်ပြီး အခန့်မသင့်ရင် အသက်အန္တရာယ်ပါ ရှိစေတတ်ပါတယ်။
ချက်ပြီးသားထမင်းတွေကို မခန်းအပူချိန်မှာပဲ ထားပြီး ၄ နာရီလောက်အကြာမှာ ပြန်နွှေးသားမယ်ဆိုရင် အစာအဆိပ်သင့်စေတတ်ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌါနက ၄ နာရီကျော်ကြာ အခန်းအပူချိန်မှာပဲ ထားတဲ့ ထမင်းကျန်တွေကို အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်တာမို့ ပြန်မနွှေးစားသင့်ကြောင်း လူမှုကွန်ယက် တွစ်တာမှာ သတိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ မနက်ညစာ တစ်ပြိုင်းတည်းချက်ထားခြင်းမျိုးကို ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ထမင်းတွေအများကြီး ကျန်နေသေးလို့ လွှင့်ပစ်ရမှာ နှမြောတယ်ဆိုရင်တော့ ဗူး(သို့)အဖုံးပါတဲ့ ခွက်ထဲမှာ ထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ကာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားသင့်ပါတယ်။